Dowlada Soomaaliya oo qorshe u sameyneysa lacag ay ka sugeysa dal ka mid ah Yurub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulan looga arinsanayay diyaarinta qorshe lagu sameynayo mashaariicdii lagu fulin lahaa deeq lacageed oo gaaraysa 38 Milyan oo Euro, taasi oo ka hartay deeq lacageed oo dowladda Jarmalka ay ugu yaboohday sanadkii 1979-kii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, isla markaana ay dowladda Jarmalku dooneyso inay ku wareejiso dowladda Federaalka ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Kulanka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ayaa waxaa kaloo ka qeyb galay Xubno ka tirsan golaha Wasiirada, quburo la soo shaqeeyay dowladdii dhexe, safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Jarmalka iyo maamulka Gobolka Benaadir, waxa ayna isku dhaafsadeen fikirro ku aadan meelaha ugu muhiimsan ee looga baahanyahay in lacagaasi lagu bixiyo.
Markii uu kulanka soo idlaaday kaddib waxaa Warbaahinta Qaranka la hadlay Wasiir ku-xigeen Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocoow oo sheegay in waxyaabo badan la isla meel dhigay oo ay ka midyihiin wax soo saarka beeraha, biyo xireenada webiyada iyo dhismaha buundooyinka.
“Kulan la isugu yimid waxa uu ahayd in laga wada tashado deeq ay bixisay dowladda Jarmalka oo sanadkii 1979-kii dowladdii dhexe la siiyay, lacag ka hartay oo aan hadda soo celinayay, waxaana ka wada hadalnay in meelaha ugu muhiimsan aan ku bixino” ayuu yiri Prof Qaloocoow.
Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocoow ayaa xusay in sameeyeen guddi farsamo oo turxaan bixin doono waxyaabaha la doonayo in lagu fuliyo deeqdaasi lacageed ee ay ka arrinsadeen, waxaana guddiga ku jira qaar ka mid ah howlwadeenada Wasaaradaha dowladda iyo quburo.
“Waxaa arrintan loo saaray guddi farsamo oo uu Madax ka yahay Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Qorsheynta mudane Diirshe, isla markaana ay maanta soo dhameystiraan waxyaabaha laga wada hadlay, iyadoo go’aanka kama dambeysta ah ay qaadan doonaan Wasiirada, laguna uruurin doono xafiiska Ra’iisul wasaaraha” ayuu yiri Wasiir ku-xigeen Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow.
Kulankaan ayaa imaanaya xilli dowladda Jarmalka ay shaacisay in 13-ka bishan ay gudaha dalka u soo direyso wafdi qiimeyn ku sameeya qorshaha ay xukuumaddu ugu talagashay in kaalmadaasi lacageed lagu fuliyo.
Akhri: Mooshinka ka dhanka ah RW Cabdiweli Sheekh